Ama-747-8 Auto Spoilers ekufikeni
Umbuzo Ama-747-8 Auto Spoilers ekufikeni
izinyanga 11 9 amahora adlule - izinyanga 10 4 Sekwedlule amaviki #1312 by mikeyjames
Okokuqala, ngibonga kakhulu ngamamodeli amakhulu.
Ku-747-8, nokunye ukuhlukahluka kwe-747 engikulayishile kusuka lapha, ama-auto-spoiler awathembeki kokwehla. Lapho ngishaya i-shift + / ingalo yomonakalisi ku-throttle quadrant uhamba njengokuzenzakalelayo FSX I-747-400, okubonakala sengathi iphakamisa ukuthi ihlome, kepha ayiphathi ekufikeni. Kubonakala kusebenza kuphela nge-747-400 ezenzakalelayo. Noma yikuphi ukushintshashintsha, noma nje ukusebenzisa i-747-400 ngemiphumela ehlukile yokufakelwa kwemali ekuphathweni okungatheni kwabaphangi bezimoto ekufikeni.
Ingabe lokhu kuyinkinga evamile noma ngenza okuthile okungalungile?
Uma kuyinkinga, ingabe kukhona okungahle kubekwe ekupheleni kwami?
Noma kunjalo, akuyona idrama enkulu futhi uma isimo esibi kunazo zonke ukuthi kufanele ngiphathe abaphangi ngesandla ngokufika ngicabanga ukuthi ngizophila.
Ukuhlela kokugcina: izinyanga ezingu-10 amasonto angu-4 adlule mikeyjames.
izinyanga 10 2 Sekwedlule izinsuku #1349 by Gh0stRider203
iyini isivinini sakho esiqondile lapho ufika ngokujwayelekile? noma yimuphi umqondo? Ngikwazi ukuthi ngezinye izikhathi ngeke bachithe uma kunethenda kakhulu ukufika ... noma kunjalo ngitsheliwe. Angikaze ngibe nenkinga nayo ....
Isikhathi ukudala page: 0.159 imizuzwana